कन्चन र अनिसाको गोप्य प्रमाण सहित बाबा मिडियामा,कसैले नसोचेको रहस्य बाहिरियो ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)… – SUDUR MEDIA
March 10, 2021 AdminLeaveaComment on कन्चन र अनिसाको गोप्य प्रमाण सहित बाबा मिडियामा,कसैले नसोचेको रहस्य बाहिरियो ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)…
चितवनका कन्चन निकै मेहेनती सोझा अनि इमान्दार मान्छे थिए । बुबाले अर्को बिबाह गरेपछि आमाले दुख गरेर पालेकि थिइन । धेरै दुख गरेर हुर्केकी आमाले अब छोरा ठुलो भयो छोराले केहि गर्ला अब भन्ने आश आमा बसेकी थिइन ।
कन्चन अनिशाको मायामा पर्छन अनि बिबाह समेत गर्छन् । बिबाह गरेपछि अनिशाको आमा बुबाले हामी तपाईहरुलाई स्वीकार गर्छौ भनेपछि उनीहरु अनिसाको घर जान्छन । ससुराल गएको दिन माइतीले कन्चनलाई कुटपिट गरेको कन्चनकि भाउजु मिडियामा आएकी थिइन ।
कन्चनलाई ससुरालीले प्रहरी चौकीमा लगे पछि अनिसा को हो तेरो भनेर सोध्दा मेरो श्रीमती हो भनेका थिए भने अनिशाले कन्चन हो मात्र भनेकी थिइन । कन्चनले सबैलाई छोडेर सन्सारबाट बिदा भए । कन्चन र अनिशाको प्रेमले निक्कै चर्चा बटुलेको थियो।
उनीहरुले काठमाडौँमा गएर विवाह गरेपछि अनिशा आफ्नै घर फर्किएपछी कन्चनले विष सेवन गरेर ज्यान फाल्ने प्रयास गरेका थिए । विवाह गरेर घर फर्किएकी अनिशा यस विषयमा स्पष्ट पार्न मिडियामा समेत आएकी थिइन । अनिशाका अनुसार उनीहरुको चिनजान फेसबुक मार्फत भएको थियो ।
विस्तारै उनीहरुको फेसबुक मै मायाको कुरा भएको स्विकारिन । तर अनिशाले विवाह नै गर्ने भनेर स्वीकार नगरेको बताएकी थिइन । कन्चनले काठमाडौँ लगेर जवर्ज*स्ती सिन्दुर लगाईदिएको समेत उनले बताएकि थिइन ।अनिशाको परिवारले छुट्टाईदिने भन्दै कन्चनले जबर्ज*स्ति सिन्दुर लगाई दिएको बताएकी थिइन।
कन्चनले ज,वर्जस्ती सिन्दुर लगाएको फोटो खिचे पछि मात्र घर पुर्याईदिने भने पछी आफुले त्यसो गरेको अनिशाले बताइएकि थिइन । आज अनिसाको भित्री गोप्य रहस्यको पर्दाफास भएको छ । कन्चनलाई यस्तोसम्म गरेको भन्दै भावुक बनेका बाबाले यस्तोसम्म सुनाए कि सुनेर सबैको आँसु आउनेछ । अनिसा र कन्चनको गोप्य प्रमाणसहित बाबा मिडियामा आएका छन ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला: